मेरा हिरोइन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २२, २०६९ रमण घिमिरे
ठ्याक्कै तिथि थाहा छैन । पुरानो 'रूपरङ' मासिक पल्टाउनु पर्छ । पहिलोपल्ट मनीषा कोइरालालाई भेट्दा मेरो मनोदशा कवितामा अत्यन्तै प्रयोग हुने दुई शब्दका पर्खालहरूभित्र थुनिएको थियो- स्तब्ध र मन्त्रमुग्ध ।
हुन त कुनै पनि सुन्दर नारीलाई देखेर उसको सौन्दर्यको बान्कीमा मोहित हुुनु कुनै अद्वितीय कुरा थिएन । तर, मनीषाको अनुहारमा कुँदीकुँदी जुन सौन्दर्य भरिएको थियो र बिनाकुनै शृंगार उनको ओठमा लाली र गालामा सिन्दुरी जुन प्राकृतिक सौन्दर्य चम्किरहेको थियो, सायद त्यो सबैले देख्ने अवसर पाउँदैनन् । उनको त्यो अकल्पनीय सौन्दर्य देखेर म स्तब्ध भएको थिएँ ।
उनीभन्दा अघि अनेकौँ फिल्म अभिनेत्रीहरूसँग कुम जोडेर हिँडिसकेको मलाई सानोतिनो आकर्षणले खासै तान्ने क्षमता राख्दैनथ्यो । त्यसैले मनीषालाई पहिलोचोटि देख्दा मन्त्रमुग्ध हुनु मेरो पत्रकारिताको एउटा अविस्मरणीय क्षण भएर आज पनि स्मृतिमा बेलाबेला सलबलाइरहन्छ । उनलाई भेट्न हामी तीनजना गएका थियौँ- पत्रकार हरिहर विरही, फोटोपत्रकार मीन बज्राचार्य र म । त्यहाँ गिरिजाबाबु पनि थिए । मीनले हराएको छैन भने उसले
खिचेको मनीषा र गिरिजाबाबुसँग हामी उभिएको फोटोले त्यो इतिहासलाई दोहोराउने छ । मनीषाको अन्तर्वार्ता मैले लिएँ र फोटा मीनले खिचेको थियो । यो मनीषा फिल्मजगत्मा प्रवेश गर्नुअघिको पहिलो अन्तर्वार्ता थियो । त्यतिखेर उनी मेघा उलको विज्ञापनले चर्चामा थिइन् ।
मनीषाको त्यस सौन्दर्यको किन बयान गरेको हुँ भने, उनले अभिनय गरेको पहिलो फिल्म 'फेरि भेटौँला' फ्लप भएपछि त्यसका निर्देशकले भनेका थिए- मनीषाको अनुहार 'फोटोजेनिक' छैन र उनलाई अभिनय गर्न आउँदैन । कुनै फिल्म पत्रिकामा यो कुरा पढेर अर्कोपल्ट स्तब्ध भएको थिएँ म । मीनले खिचेको फोटो र मैले पहिलोपल्ट देखेको मनीषाको सौन्दर्यमा खोट लाउने ठाउँ थिएन । उनी फोटोमा पनि त्यति नै सुन्दर थिइन्, जति हाम्रा आँखामा । पछि मुम्बईमा गएर सुभाष घईको 'सौदागर' मा गरेको अभिनय देखेर म फेरि स्तब्ध भएँ, 'फेरि भेटौँला'का अभियोगहरू स्मरण गरेर । मैले मनीषालाई भेटेको यति एकपल्ट हो । त्यसपछि मुम्बई फिल्मको झकिझकाउमा पुगेर उनले नेपाली फिल्मलाई बिर्सिइन्, मैले पनि स्मृतिबाट उनको छवि खाली गरिदिएँ ।
मैले चलचित्र पत्रकारितामा कलम चलाउँदादेखि बिर्को बन्द गर्दाबीचको अन्तरालमा अनेकौँ अभिनेत्रीहरू आए अचानक र तीमध्ये अधिकांश गए पनि अचानक नै । तर, मिथिला शर्मादेखि निरुता सिंहसम्मका केही थोरै अभिनेत्रीको छाप आज पनि मेरो मनमा एउटा शिलालेखजस्तो भएर बसेका छन् । त्यसमध्येकी एक शिलापत्र हुन्, मिथिला शर्मा । मिथिला सायद फिल्ममा भनिने 'नायिका' पनि हुन चाहन्थिन्, 'अभिनेत्री' मात्र होइन । तर नेपाली फिल्मले उनलाई अभिनेत्रीमै सुरक्षित राख्नु बढी उपयुक्त ठान्यो । त्यसैले उनले धेरै हिरोहरूसँग झरनामा भिज्नु परेन, बगर र वागमा नाच्नु परेन । यद्यपि उनी अभिनेत्रीबाहेक पारङ्गत नृत्याङ्गना मात्र होइन नृत्य शिक्षिका पनि थिइन् अनि उनीसँग त्यतिकै रूप, यौवन र उमेर पनि थियो ।
मिथिलालाई पहिलोपल्ट अहिलेको रुसी सांस्कृतिक केन्द्र कमलपोखरी छेउको डेरामा भेट्दा उनी उमेरले बीस नाघेकी थिइनन् । त्यस बेला वागमतीमा फोहोर होइन, सङ्लो पानी बग्थ्यो । यो सङ्लोपनसँग मिथिलाको सुशीलता र स्वभाव गाँसिएको अनुभव गर्थें म । कहिलेकाहीँ मानिसको स्वभावले पनि उसलाई उसले चाहेजस्तो हुन दिँदैन । शिष्ट, सौम्य, सुशील र सुभाषिनी, एउटा सुन्दर नारीमा हुनपर्ने सबै गुण र स्वभाव थिए उनमा र अहिले पनि छन् । तर त्यति बेलाका फिल्म निर्देशकहरूले नायिकामा खोज्ने चञ्चलता र उत्ताउलोपन सायद मिथिलाबाट प्राप्त गर्न सकेनन् र उनी अभिनेत्रीमै सीमित हुन पुगिन्, सफल 'हिरोइन' हुन सकिनन् ।
चालीसको दशकपछि हुनुपर्छ, नेपाली चलचित्रमा अभिनेत्रीहरूको भीड लागेको थियो । करिश्मा केसी, कृष्टि केसी, शर्मिला मल्ल, गौरी मल्ल, मौसमी मल्ल, लक्ष्मी श्रेष्ठ, नवीना श्रेष्ठ, सुशीला रायमाझी आदि अनेकौँ नामहरू यतिखेर मेरो मस्तिष्कमा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् ।
त्यस बेलाका नायिकाहरू बडा फुर्सदिला थिए । कम फिल्म बन्थे र उनीहरूको खासै आम्दानी पनि थिएन । म सम्झन्छु, कृष्टि केसी उनको माइती खत्री फिड इन्टस्टि्रज, बाँसबारीबाट धेरैपटक पैदलै लगनटोलको 'रूपरङ्ग' कार्यालयमा आएकी छन् र हामी पनि उनलाई खोज्दै पैदल नै यति लामो बाटो हिँडेका छौँ । भर्खरै हिकोला कलर ल्याबको विज्ञापनमा कृष्टिको पोस्टर आएको थियो । श्याम वर्णकी यी कन्या नाङ्गो आँखाले भन्दा क्यामेराको आँखामा बढी सुन्दर देखिन्थिन् । र, झरनामा भिजेकी हिकोलाको पोस्टरमा कृष्टिको सुन्दरता निखारिएको देखिन्थ्यो । तर पनि उनी एकल नायिका हुन सकिरहेकी थिइनन् । त्यही बेला दीपक रायमाझीले आफ्नो पहिलो चलचित्र 'भाग्यरेखा'मा उनलाई आफ्ना भान्जा राजेश हमालकी नायिकाको रूपमा अनुबन्ध गरे । तर दुर्भाग्य, त्यो कृष्टिका लागि पहिलो एकल फिल्म हुन सकेन । राजेश र उनी दुवैलाई विभिन्न काण्डहरूको आरोपमा 'भाग्यरेखा'बाट निकाला गरियो । पछि दीपक रायमाझीले नै निर्देशन गरेको फिल्म 'युगदेखि युगसम्म'मा एकल रूपमा नेपाली चलचित्रमा प्रवेश पायो यस जोडीले ।
त्यस बेला 'सेक्स अपिल' भन्ने शब्द नेपाली फिल्म जगत्मा सुगा वाणी भएको थियो । अर्थ जानेर होस् या नजानेर हरेक फिल्मकर्मीहरू आफ्ना नायिकामा 'सेक्स अपिल' खोज्थे । र, यसको परीक्षा राजीव श्रेष्ठको क्यामेराले लिन्थ्यो । फिल्म कम बन्थे त्यसैले नयाँनयाँ फिल्मी पोस्टरहरू भित्तामा टाँगिने कुरा थिएन । त्यसैले हाम्रा अभिनेत्रीहरू फिल्ममा भन्दा बढी राजीवको ग्यालरीमा टाँगिएका विभिन्न 'पोज'का फोटोहरूबाट चर्चित थिए । त्यस बेलाका कमै अभिनेत्री होलान्, जो राजीवको क्यामेराबाट जोगिएर रजतपटमा आएका हुन् या रजतपटमा आएपछि राजीवको क्यामेराबाट छलिएका हुन् ।
करिश्मा र गौरीले राजीवको स्टुडियोमा नछिरी प्रकाश थापाको 'सन्तान'मा छानिने अवसर पाए । करिश्मा अद्भुत प्रतिभा भएकी झोँक्की अभिनेत्री थिइन् । नायक प्रकाश अधिकारीले आफू पनि हिरो हुने उद्देश्यका साथ करिश्मालाई हिरोइन बनाउन लिएर गएका थिए थापाकहाँ । प्रकाश आफूचाहिँ सफल भएनन् तर करिश्मालाई सफल बनाए । करिश्माले प्रकाश थापाबाट 'ब्रेक' पाए पनि उनका भावी फिल्महरूमा दोहोरिने मौका पाइनन् । थापा र उनीबीच असमझदारी बढ्यो र लामो समयसम्म वाक्युद्ध नै चल्यो ।
त्यस बेला नेपाली चलचित्रमा थापाको जगजगी चलेको थियो । अनि करिश्माको प्रहारबाट आफ्नो अभिमानमा धक्का लागेको अनुभव गरेका थापाले घोषणै गरिदिए, 'म करिश्मालाई मेरो त के, कुनै पनि नेपाली फिल्ममा ढिक्मिन दिन्नँ ।' तर करिश्माले प्रतिभालाई प्रस्फुटन हुनबाट कसैले रोक्न सक्तैन भन्ने शाश्वत कथनलाई प्रमाणित गरिदिइन् र थापाको विरोधलाई चुनौती दिँदै भकाभक नयाँनयाँ फिल्महरूमा काम पाइरहिन् । उनको यो यात्रा आज उनलाई उमेरले उकालीतिर डोर्‍याइरहँदा पनि निरन्तर छ । 'सेक्स अपिल'सँगै अभिनयले पनि साथ दिएका कारण करिश्मा आजसम्म चलचित्रमा टिक्न सफल भएकी हुन् । तृप्तिपछि अभिनय र अनुहार दुवैले साथ दिएको अभिनेत्री हुन् करिश्मा ।
तर, उनीसँगै आएकी गौरीलाई पछिल्लो प्रतिभाले करिश्माभन्दा बढी नै साथ दिए पनि अघिल्लोमा दर्शकले त्यति स्विकारेनन् । निर्देशक यादव खरेलले एउटा चलचित्रमा गौरीको सम्पूर्ण पक्षलाई चित्राङ्कन गर्ने प्रयत्न नगरेका होइनन् तर यसमा उनी र गौरी दुवैको प्रयास विफल भयो । गौरी र मिथिलामा मिल्दाजुल्दा गुणहरू थिए । मिनलसार स्वभाव, मीठो बोलीवचन र नृत्य-पारङ्गत आदि तर चलचित्रमा एउटा नायिकामा देखिनुपर्ने 'अपिल'मा सायद कमी थियो हाम्रा निर्देशकका आँखामा । त्यसैले पछिपछि आमा र दिदीको भूमिकामा मात्र उनी सीमित रहिन् । उनी नेपाली चलचित्रमा नायिका हुन नसकेकीमा मलाई मिथिलाको नियति स्मरण हुन्छ । कहिलेकाहीँ मानिसमा आफ्नो क्षेत्रका सबै गुण-विशेषता भएर पनि सफल हुन सक्तैनन् । त्यो समयले उनीहरूमाथि न्याय गर्न नसकेको परिणाम अहिले हाम्रा चलचित्रले बेहोर्न बाध्य छन् ।
नायिका नवीना अन्तर्वार्ता दिन असाध्यै रुचि राख्थिन् । उनी आफूलाई 'सुपर मार्केटकी सुपर हिरोइन' भन्थिन् । असनमा बस्थिन्, जति बेला त्यो थलो प्रसिद्ध थियो । तर, एउटा नेवारी चलचित्रबाट प्रवेश गरेकी नवीना कालान्तरमा असनजस्तै पुरानो बजारमा परिणत भइन् । नवीना राम्री श्यामवर्णकी युवती थिइन् । त्यसैले हामी 'तुयु मै' -काली केटी !) भनेर जिस्काइरहन्थ्यौँ, उनी रिसाउँथिन् । उनी एकदमै फरासिली हिरोइन थिइन् ।
अंशुमाला शाहीको वास्तविक नाम थियो सुषमा शाही । उनी 'आदर्श नारी'बाट नेपाली चलचित्रमा 'इन्ट्री' गर्दा यही नामकी अर्की नायिकाको नाम शिखरमा भएकाले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर अंशुमाला भइन् । अशंुमाला स्वभावले मिथिलाको कोटीकी थिइन् । कर्णपि्रय वचन, शालीन र सम्य स्वभावका कारण उनमा पुराना हिन्दी फिल्मका नायिकाहरूको गुण बढी आएजस्तो देखिन्थ्यो । वास्तवमा यही गुणले उनलाई चलचित्रमा एउटा नायिकाको रूपमा सफल हुन दिएन । चाँदीको पर्दामा यसलाई अयोग्य माने पनि पर्दाबाहिरको समाजका लागि भने अंशुमालाको यही विशेषता सर्वपि्रय र अविस्मरणीय हुन पुग्यो । आज पनि त्यस कालखण्डका चलचित्रकर्मीहरू अंशुमालालाई एक शिष्ट अभिनेत्रीका रूपमा सम्झन्छन् ।
अभिनय र अनुहारले त्यति धोका नदिँदानदिँदै पनि नेपाली चलचित्रले धोका दिएका दुई अभिनेत्री हुन्- लक्ष्मी श्रेष्ठ र सुशीला रायमाझी । यी दुवै अभिनेत्रीहरू रङ्गमञ्चबाट आएका थिए । तसर्थ यिनमा असिमित अभिनय क्षमता थियो । लक्ष्मी श्रेष्ठ नवागन्तुक नायिकाहरूलाई अभिनय र नृत्य सिकाउँथिन् । उनैले सिकाएको अभिनयको बाटोमा हिँडेर धेरै युवतीहरू सफल हिरोइन बने तर लक्ष्मी आफूचाहिँ 'चेला चिनी र गुरु गुण' कै उक्तिमा चित्त बुझाउन बाध्य भइन् । कहिल्यै नायिका या सिनेमाको सफल अभिनेत्री हुन सकिनन् । यद्यपि त्यस बेला 'मालती-मङ्गले'जस्तो सफल गीतिनाटककी सशक्त अभिनेत्रीका रूपमा उनको नाम प्रशंसित थियो ।
अभिनय गर्ने महिलालाई अभिनेत्री भनिन्छ । तर, हाम्रा आमनिर्देशकहरूले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको गाँठी कुरै यही हो । उनीहरूले खालि सुन्दर र कामुक अनुहार मात्र खोजे तर ती सुन्दर अनुहारका धनी हिरोइनहरू सबै अभिनेत्री थिएनन् । मलाई अझ पनि लाग्छ, मिथिला, लक्ष्मी, सुशीला, अंशुमाला या गौरी यस्ता विलक्षण प्रतिभाशाली अभिनेत्रीलाई निर्देशकहरूले अभिनयका आँखाले हेरेनन् । निर्देशकमा यस्तो विशेषता पहिचान गर्ने दिव्यदृष्टि नै थिएन । मुम्बइया फिल्मको सिको गर्ने हाम्रा निर्देशकले त्यहाँका कम सुन्दर तर विलक्षण अभिनयले चलचित्र उद्योगलाई नै प्रभाव पार्ने स्मिता पाटिल, शवाना आजमीहरूको अभिनयशैलीको सिको गरेर अभिनेत्री जन्माउन सकेनन् । पारदर्शी लुगा लगाएर झरनामा नुहाउँदै गाउने या छोटा पहिरनमा रूखमुनि नाचिहिँड्ने कन्या मात्र उनका दृष्टिमा हिरोइन ठहरिए । होइन भने प्रकाश थापाद्वारा भारतबाट भित्र्याइएकी मीनाक्षी आनन्दको दाँजोमा यी अभिनेत्री कुनै पनि अर्थमा कमजोर थिएनन् अभिनयमा ।
अहिले सम्झँदा सारै न्यानो लाग्छन् ती स्मृतिहरू । मीन, म र मौसमी मल्ल फोटो सेसन गराउन लगनबाट हिँडेरै अहिलेको विमानस्थल नजिक रहेको गल्फकोर्टमा पुग्थ्यौँ । कृष्टिलाई 'साप्ताहिक मञ्च'को छतमा उभ्याएर फोटोसेसन गराउँथ्यौँ । प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको चउरमा बसेर गौरीसँग अन्तर्वार्ता लिन्थ्यौँ । त्यस बेला पत्रकार र हिरोइनहरूबीच सारै सहिष्णुपूर्ण वातावरण थियो र एकअर्कामा विश्वास पनि । खाजा खाने र खुवाउने चलन थिएन । किनभने दुवै थरीसँग गोजीखर्चको अभाव हुन्थ्यो । यसमा बरू नवीना चाहिँ अपवाद थिएन । उनी यहीँकी स्थानीय भएकीले उनलाई भेट्न हामी घरमै जान्थ्यौँ । यसरी जाँदा एक कप चिया नखुवाई पठाउदिन थिइन् ।
हिरोइनमा साच्चिकै आर्थिक अभाव थियो त्यस बेला । हिरोइन भएपछि ठाँटिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता त थियो उनीहरूलाई तर उनीहरू सधैँ यस बाध्यतालाई पालना गर्न असमर्थ थिए । उनीहरू फिल्ममा खेल्न चाहन्थे जसरी भए पनि, यसमा पारिश्रमिकको मोलमोलाइजा गर्ने कुरै थिएन । पत्रिकामा फोटो छापिनुमा उनीहरू बढी गर्व गर्थे । टेलिभिजन थिएन र पत्रिकामा रङ्गीन फोटो छाप्ने त्यति चलन थिएन । एक-दुइटा चलचित्र पत्रिकामा छापिएका रङ्गीन फोटोसहितका आफ्ना अन्तर्वार्ता पढेर हिरोइनहरू आनन्दित हुन्थे । उनीहरूका लागि यो नै त्यस समयको सबैभन्दा ठूलो प्रचार माध्यम थियो ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०६९ ०९:३९
स्पेनको बुल फाइट्स
भाद्र १५, २०६९ महेशविक्रम शाह
काठमाडौ — 'ऊ ढोकातिर हेर्नुहोस् । बुल फाइट्स सुरू भयो,' जालन्धाले भनिन् । खैरो रंगको साँढे शिर उचाल्दै, पुच्छर ठड्याउँदै र जीउ बटार्दै बुलरिङमा दौडिन थाल्यो । साँढेले चारैतिर नजर दौडायो । ऊ निस्कने बाटो कतै थिएन । चारैतिर मान्छे नै मान्छे । ऊ आत्तियो ।
म स्पेनको राजधानी म्याडि्रडको विश्व प्रसिद्ध 'प्लाजा दे टोरस' -बुल फाइटिङको घर) को दर्शक बनिरहेको छु । कैयौं वर्षदेखिको आप\_mनो सपना पूरा भएकोमा म पुलकित भइरहेको थिएँ ।
साँझको ठीक ६ बज्यो । तर घाम दुई तीन बजेको झैं पाहारिलो थियो । हामीहरूको सिट बुलरिङको नजिकै थियो । मसँग दाइहरू ठाकुरराम वर्तौला, मोहनराज जोशी, साथी दिनेश अमात्य तथा म्याडि्रडका स्थायी बासिन्दा बनेका नेपाली भाइ तिलक कुँवर र तिनकी स्पेनी श्रीमती जालन्धा थिइन् । एक्कासि हात्ती कराएको जस्तो आवाज आयो । बुलरिङको पछाडि रहेको गेटको ढोका खुल्यो ।
'ऊ ढोकातिर हेर्नुहोस् । बुल फाइट्स सुरु भयो,' जालन्धाले भनिन् । खैरो रंगको साँढे शिर उचाल्दै, पुच्छर ठड्याउँदै र जीउ बटार्दै बुलरिङमा दौडिन थाल्यो । साँढेले चारैतिर नजर दौडायो । ऊ निस्कने बाटो कतै थिएन । चारैतिर मान्छे नै मान्छे । ऊ आत्तियो । उसले खुट्टाका खुरले जमिन खोस्रँदै बुर्र माटो उडायो । त्यसपछि शिर ठाडो पारेर हुँकार गर्‍यो । उसका नाकका प्वालबाट फुँकार निस्किरहेको थियो ।
ए..ए..ए.. भन्दै काठको फल्याकको आडबाट एउटा मान्छे फुत्त निस्क्यो र त्यसले आफूसँग भएको गाढा गुलाफी रङ्गको कपडा साँढेतिर देखाउँदै हल्लायो । साँढे हुत्तिएर आयो । ऊ गुलाफी रुमाल हल्लाउँदैै पछाडि सर्‍यो र काठको फल्याकको आडभित्र छिर्‍यो । साँढेले आप\_mना सिङ्गले फल्याकमा हान्यो । अर्को आडबाट अर्को मानिस फुत्त निस्क्यो र गुलाफी रुमाल हल्लाउँदै साँढेलाई आफूतिर आउन आमन्त्रण गर्‍यो । साँढे फल्याकमा हान्न छाडेर ऊतिर बढ्यो । ऊ पनि साँढेलाई छकाउँदै आडभित्र गएर लुक्यो । आप\_mनो आक्रमण लगातार निस्फल भएकोमा साँढे विचलित भइरहेको थियो । साँढे बुलरिङमा आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै दुई घोडचढीहरू लामो भाला हातमा समातेर बुलरिङका दुई कुनामा उभिएका थिए । घोडचढीको पैतलादेखि घुडाँसम्म धातुको कवच थियो ।
'यी घोडचढीहरूलाई पिकाडर भनिन्छ र तिनीहरूले प्रयोग गर्ने भालाको नाम पिका हो । यी बुल फाइटरहरूले साँढेलाई दौडाई-दौडाई तताउने काम गरे । साँढे रिसले आँखै नदेख्ने भएको छ । अब यी पिकाडरहरूले भालाले सााढेको काँधमा घोचेर यसलाई पीडा दिनेछन् । पीडाको अनुभूतिले साँढे झन् रिसले आगो हुनेछ,' पेसाले सिभिल इन्जिनियर जालन्धा मलाई बीचबीचमा बुल फाइटिङको प्रक्रिया र नामहरूका बारेमा जानकारी दिइरहन्थिन्, बोलिन् ।
मैले बुलरिङमा हेरें । बुल फाइटरहरू साँढेलाई झुक्याउँदै रिङ्गबाहिर आइसकेका थिए । रिङ्गभित्र दुई घोडचढीसहितका दुई घोडा र एउटा साँढे मात्र थिए । घोडाको घाँटीदेखि पुच्छरसम्म डँडाल्नुभन्दा मुनि घुँडासम्म शरीरको भागलाई कडाजस्तो लाग्ने फिका पहेालो गद्दाले बेरेको थियो । यसलाई 'पेटो' भनिँदो रहेछ । बुल फाइटिङको क्रममा साँढेको हनाइबाट घाइते हुनबाट जोगाउन घोडालाई यसरी सुरक्षित बनाइँदो रहेछ । घोडचढी 'पिकाडर' ले साँढेलाई ललकार्‍यो । साँढे हुँकार गर्दै दौडेर आयो र सिङ्गले घोडालाई हान्न थाल्यो । घोडा चुपचाप थियो । नदेखेजस्तो, नसुनेजस्तो, न त बुझेजस्तो । घोडाको आँखामा केही नदेखोस् भनेर पट्टी बाँधिएको थियो । कुनै आवाज नसुनोस् भनेर कपासका डल्ला कोचेको हुँदो रहेछ । त्यस्तै मुखबाट आवाज पनि ननिकालोस् भनेर घोडाको आवाज नली काटिएको हुन्छ रे ! पिकाडर चढेको घोडा वकलाटो थियो । साँढेले सिङ्गले जतिसुकै हिर्काए पनि ऊ कुनै प्रतिक्रिया नजनाई उभिएको थियो । पिकाडरले भालाले साँढेको काँधमा रोप्यो । घाउबाट रगतको भेल छुट्यो । तर साँढेले घोडालाई हान्न छोडेन ।
बुलरिङमा हातमा गाढा गुलाफी कपडा समातेका लडाकुहरू फेरि प्रकट भए । तिनीहरू साँढेलाई आफूलाई आक्रमण गर्ने चुनौती दिन थाले । साँढे आफ्ना आँखाले जता टहक देख्थ्यो त्यतै कुद्घै सिङ्गौरी खेल्न थाल्थ्यो । दुई पिकाडरहरूले बुलरिङ छाडे । साँढेले छुट्याउन सकिरहेको थिएन, उसको वास्तविक शत्रु को हो ? रातो गुलाफी कपडा वा त्यो कपडालाई हातले कलात्मक पाराले नचाउँदै उसलाई मूर्ख बनाइरहेको लडाकु ! आँखा ढाकिएको, कान थुनिएको र आवाज थुनिएको विवश र लाचार घोडा वा त्यसमाथि सवार चुच्चो भाला बोकेको पिकाडर ? साँढे सबैलाई यौटै ठानिरहेको थियो र यही बुझाइमा ऊ झन्झन् क्रोधित बनिरहेको थियो ।
बुलरिङमा बल्छीको आकारको चुच्चो भएका रङ्गीविरङ्गीे तीर समातेका दुई व्यक्तिहरू प्रकट भए । स्पेनी भाषामा तीरलाई 'बन्डारिला' र तीर प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई 'बन्डारिलेरो' भनिदो रहेछ । बन्डारिलेरोले इम्ब्रोइड गरिएको चाँदीको रङ्गको ज्याकेट लगाएका थिए । तिनीहरूको हातमा साँढेलाई झुक्याउने रातो कपडा थिएन । एकजनाले आप\_mना दुवै हात माथि उठाएर साँढेलाई आवाज दियो । साँढे कुद्दै आयो । बन्डारिलेरोले विद्युतीय गतिमा आफ्नो शरीरलाई साँढेकोेेेेेेेेेेो सिङ्गको निसाना हुनबाट बचाउँदै उप|mेर साँढेको काँधमा दुवै तीर रोप्यो । पछाडिबाट फेरि अर्को लडाकु देखा पर्‍यो । उसले आवाज दियो । साँढे पछाडि फक्र्यो र हुर्रिदै आक्रमण गर्न दौड्यो । उसले पनि अद्भुत कला देखाउँदै साँढेलाई झुक्यायो र हातमा भएका दुई तीर साँढेको कााधमा रोप्यो । तीरले बनाएको घाउबाट रगत रसाउँदै साँढेको गर्धन र पिठ्युँ भिज्यो । साँढे असहाय देखियो ।
बुलरिङमा 'म्याटाडर दे टोरस' -साँढेलाई मार्ने लडाकु) देखा पर्‍यो । ऊ बाईस-तेईस वर्षको ठिटो थियो । उसले सेतो कमिज, कालो टाई, सुनको रेसाले इम्ब्रोइड गरिएको गुलाफी रङ्गको पूरा बाहुला भएको छोटो ज्याकेट र घुँडासम्म आउने गुलाफी रङ्गको ट्राउजर, गुलाफी रङ्गकै लामो मोजा र कालो रङ्गको जुत्ता पहिरेको थियो । उसको हातमा रातो कपडा थियो जसको एउटा छेउ काठको लठ्ठीमा बाँधिएको थियो । काठको उक्त लठ्ठीलाई 'म्युलेटा' भनिदो रहेछ । लडाकुले म्युलेटालाई समातेर रातो कपडालाई आप\_mनो वरिपरि फिंजाइरहेको थियो । उसको अर्को हातमा लामो र धारिलो तरबार थियो ।
बुलरिङमा दुई प्राणीहरू मात्र थिए, एउटा मान्छे र अर्को साँढे । साँढेको अनुहारमा क्रूरताको भाव थियो । बुलरिङको लडाकु नायक -म्याटाडर) ले साँढेलाई चर्को आवाज निकाल्दै हाँक दियो । साँढेले शिर ठाडो पारेर 'म्याटाडर'लाई हेर्‍यो । मैले देख्दादेख्दै साँढे बाघजस्तो भएर म्याटाडरमाथि जाइलाग्न कुदिसकेको थियो । साँढेले जोडले प्रहार गर्‍यो । म्याटाडरले उसको प्रहारलाई रातो कपडाले छेक्यो । ऊ रातो कपडाको आडमा कोल्टे उभिएको थियो । म्याटाडर साँढेलाई हाँक दिन्थ्यो, साँढे अझ जोडले रातो कपडामा हिर्काउँथ्यो । रिस, आवेग र उत्तेजनाले थरथर काँपिरहेको साँढे खुरले जमिनको माटो बुर्रबुर्र उडाउँदै र पुच्छर ठाडो पार्दै बल लगाएर सिङ्गले रातो कपडामा हिर्काइरहेको थियो । साँढे र म्याटाडरबीचको दूरी केही इन्चमात्र थियो । म्याटाडर आप\_mनो कला-कौशलले रातो कपडालाई यसरी ओर्काउने र फर्काउने गथ्र्यो कि साँढे उसको वरिपरि लट्टु घुमेझैं फनफनी घुम्न बाध्य हुन्थ्यो । बुल फाइटको सबैभन्दा रोमाञ्चक र अद्भुत क्षण यही लाग्यो मलाई । साँढेलाई घुइँघुइँती घुमाइसकेपछि म्याटाडर फरक्क फक्र्यो । उसले आप\_mनो हातले छातीमा ठोक्दै दर्शकतिर हेरेर जोडले चिच्यायो । मलाई आश्चर्य लाग्यो । म्याटाडर साँढेको कुनै परवाह नै नगरी ऊतिर पिठ्युँ फर्काएर दर्शकतिर गर्विलो मुद्रामा हेरिरहेको थियो । उसको उच्चस्तरको कला कौशल देखेर दर्शकहरू उसलाई स्यावासी दिँदै ताली पिटिरहेका थिए । मैले साँढेलाई हेरें । ऊ हलचल नगरी जहाँको तँही उभिएर ट्वाँ परेर आफूतिर पिठ्युँ फर्काई उभिएको आप\_mनो दुश्मनलाई असहाय भएर हेरिरहेको थियो । उसको मुखबाट सेतो फिँज निस्किरहेको थियो । यही मौका थियो, ऊ म्याटाडरलाई पछाडिबाट हान्न सक्थ्यो । तर ऊ डेग चलिरहेको थिएन । म्याटाडरले आप\_mनो तरबार परिवर्तन गर्‍यो । यो तरबार अघिल्लो भन्दा धारिलो र चम्किलो थियो ।
'इस्कोडाको समय आयो, लडाकुले अब साँढेलाई तरबारले घोपेर मार्छ,' जालन्धा बोलिन् ।
मलाई किनकिन नरमाइलो लाग्यो । म्याटाडर अघि सर्‍यो । उसले रातो कपडा फर्‍याकफुरुक गर्दै साँढेको दृष्टि रुमालमा अल्झाइरह्यो । उसले दाहिने हातमा रहेको तरबार माथि उठाएर सााढेको गर्धनतिर तेर्‍स्यायो । म्याटाडरले विद्युत्तीय गतिमा उप|mेर साँढेको गर्धन र काँधको सन्धिस्थलमा तरबार रोप्यो । तर पूरै रोपिएन । साँढे जोडले जमिनबाट उप|m्यो र म्याटाडरलाई हान्न दौड्यो । अघि रोपेको तरबार उछिट्टदिै भुइँमा खस्यो । उसले रातो कपडा हल्लाएर साँढेलाई नियन्त्रणमा लिँदै खसेको तरबार उठायो र उच्च कौशलको प्रदर्शन गर्दै पहिलेकै ठाउँमा फेरि तरबार रोप्यो । यो प्रहार अचुक थियो । साँढेले मुखबाट रगत बान्ता गर्‍यो । हामीहरू यो अद्भुत दृश्य हेरिरहेका थियौं । साँढे रगत छाद्दै बिस्तारै किनारतिर आयो । किनारमा पुगिसकेपछि साँढे घुँडा खुम्च्याएर बस्यो र एकैछिनमा भुइँमा चारैखुट्टा तन्काएर पसारियो । उसले सदाका लागि बुलरिङ छोडिसकेको थियो । ढोकाबाट यौटै जुवामा नारिएका तीन खच्चरहरूलाई दौडाउँदै तीन व्यक्तिहरू आए । पुछारमा डोरीले साँढेको गर्धन बाँधे र साँढेलाई तान्दै खच्चरहरू ढोकाभित्र छिरे ।
केही समयपछि अर्को 'फाइट' सुरु हुँदै थियो । जम्मा छवटा 'सो' हुँदा रहेछन् र प्रत्येक 'सो' मा एउटा साँढेले ज्यान गुमाउने रहेछ । गेटको ढोका खुल्यो र कालो रङ्गको अर्को साँढे कुद्दै आयो । अब हाम्रा लागि 'बुल फाइट्स' नौलो थिएन । पहिलो 'सो' पछिका प्रक्रियाहरू यौटै थिए । तर म्याटाडर -लडाकु) र साँढेको शक्ति, साहस, सामथ्र्य र सीप भने पक्कै पनि मौलिक थिए । बुुुलरिङमा लडाकुहरूले पहिलो साँढेलाई झैं यसलाई पनि गुलाफी रुमाल हल्लाउँदै यता र उता दगुराउँदै उत्तेजित बनाए । पिकाडरले घोडाको पिठ्युँमा चढेको चढ्यै साँढेको कााधमा तिखो भालाले प्रहार गरेर रक्तरञ्जित बनायो । दुईजना बन्डारिलेरोले साँढेलाई छकाउँदै काँधमा रातो र सेतो रङ्गका तीरहरू रोपे । साँढे क्रुद्ध देखियो । अन्ततः बुलरिङमा म्याटाडर दे टोरोस -मुख्य लडाकु) ले प्रवेश गर्‍यो । ऊ रातो रुमाल हल्लाएर साँढेलाई आफ्नो वरिपरि घुुइँघुइँती रिङ्न बाध्य पारिरहेको थियो । अचानक लडाकु कतै चुक्यो, साँढेले रातो रुमाल सँगसँगै लडाकुलाई सिङ्गले माथि उचाल्यो र जमिनमा बजार्‍यो । जमिनमा असहाय उत्तानो परेको लडाकुलाई साँढे सिङ्गले हान्न थाल्यो । दर्शकदीर्घामा हाहाकार मच्चियो । मैले पनि सोचें लडाकु अब मर्‍यो । तर तीव्र गतिमा चारैतिरबाट अन्य लडाकुहरू गुलाफी रुमाल हल्लाएर साँढेलाई हाँक दिँदै आए । साँढे उत्तानो परेको आफ्नो मुख्य शत्रुलाई छोडेर हाँक दिनेहरूतर्फ झम्ट्यो । अन्य व्यक्तिहरूले म्याटाडरले टोरोसलाई उठाए । घाइते भए पनि ऊ बुलरिङ्ग छाड्न तयार देखिएन । ऊ तुरुन्तै सम्हालियो । उसले भुइँमा खसेको तरबार र रातो कपडा उठायो र साँढेतिर हेर्दै हाँक दियो । मैले देखें उसको ट्राउजरको पछाडिको भाग च्यातिएको थियो । उसले केहीबेर साँढेलाई खेलाएपछि तरबारले काँधमा प्रहार गर्‍यो तर तरबार आधा मात्र रोपियो । साँढेले रगत ओकल्यो । ऊ बिस्तारै किनारतर्फ आयो र घुँडा खुम्च्याएर बस्यो । तर ऊ मरेन । एकजना व्यक्ति अघि सर्‍यो र सानो छुरीले टाउको पछाडिको मेरुदण्डमा प्रहार गर्‍यो । एकैछिनमा साँढेको प्राणपखेरु उडेर गयो ।
हामीले हेरेको तेस्रो बुल फाइट भने विशेष प्रकारको थियो । यस फाइटको आकर्षण साँढे नभएर म्याटाडर दे टोरोस -मुख्य लडाकु) थियो । कालो रङ्गको उन्मुक्त साँढेलाई अत्यन्त कलात्मक ढंगले कुशलतापूर्वक खेलाई खेलाई थकित बनाएको थियो उसले । उसले देखाएको चामत्कारिक र अद्भुत युद्ध कौशलले म अभिभूत नभइरहन सकिनँ । उसको अगाडि त्यो अजङ्गको रिसाहा साँढे लाचार देखिएको थियो । अन्ततः त्यो क्षण आइपुग्यो जब लडाकुले आप\_mनो तरबार साँढेको गर्धन र काँधबीचको त्यो विशेष स्थानमा रोप्नुपर्छ, जसले गर्दा मुटुबाट शरीरमा रगत जाने मुख्य रक्त नली काटिन्छ र साँढेको तत्काल मृत्यु हुन्छ । लडाकुले एकै झमटमा पूराको पूरा तरबार साँढेको शरीरमा रोप्यो । तरबारको बिँडमात्र हामी देखिरहेका थियौं । पूरै तरबार साँढेको शरीरभित्र गाड्न लडाकु सफल भएको थियो । हामीहरू अचम्मित भयौं । हामीमात्र होइन सारा दर्शकहरूले परर ताली पिटे । साँढे एकछिन चलमलायो अनि घुप्लुक्क जमिनमा ढल्यो । मैले देखें दर्शकहरू चिच्याउँदै हातले सेतो रुमाल हल्लाइरहेका थिए । मैले यसको अर्थ बुझिनँ । जालन्धातिर हेरें । उनले भनिन्, 'सेतो रुमाल हल्लाएको अर्थ हो लडाकुले उत्कृष्ट काम गर्‍यो । उसलाई राम्रो पद देऊ ।'
'यस्तैगरी सेतो रुमाल अर्को परिस्थितिमा पनि हल्लाइन्छ,' जालन्धाले मतिर हेर्दै फेरि भनिन् । 'यदि साँढेले लडाकुको दाँजोमा उत्कृष्ट लडाइँ लड्यो भने दर्शकहरुले साँढेको पक्षमा पनि यसैगरी सेतो रुमाल हल्लाएर सम्मान व्यक्त गर्छन् । त्यसपछि साँढेलाई बुलरिङबाट मुक्त गरिन्छ र उसलाई जुन र्फमबाट ल्याइएको हो त्यहीं पठाइन्छ । उसले आप\_mनो बाँकी जीवनमा फेरि यो रिङ्गमा फर्केर आउनु पर्दैन ।' जालन्धाको कुरा सुनेर म दङ्ग परे ।
चौथो बुल फाइट्सका लागि रिङ्गमा उत्रिएको साँढे पनि कालै रङ्गको थियो । उसँग लड्न पहिलो बुल फाइटिङको म्याटाडर बुलरिङ्गमा उत्रिएको थियो । साँढेले पिकाडर चढेको घोडामाथि भयानक आक्रमण गर्‍यो । पिकाडरले साँढेको काँधको मांसपेशी छियाछिया हुनेगरी शक्ति लगाएर भाला रोपिरहेको थियो तर साढे झन्झन् क्रुद्ध हुँदै सिङ्गले घोडाको जीउमा प्रहार गरिरहेको थियो । अचानक पिकाडर घोडासहित भुइँमा ढल्यो । पिकाडर जुरुक्क उठेर ज्यान जोगाउन किनारतिर भाग्यो । साँढे तिखा सिङ्गले घोडामाथि जाइलाग्न थाल्यो । लडाकुहरू गुलाफी रुमाल हल्लाउँदै साँढेलाई घेर्न आए । साँढेले घोडालाई हान्न छोड्यो र लडाकुतिर बढ्यो । पाँच छ जना मान्छे मिलेर घोडालाई जमिनबाट उठाए । घोडा लड्खडाइरहेको थियो । यो चौथो साँढे पनि अन्तमा मारियो । तर यसपटक म्याटाडरले तेस्रो लडाकुले झैं एकैपटक तरबार रोपेर साँढेलाई मार्न सकेन । पटकपटकको प्रहारपछि मात्र साँढे मर्‍यो ।
पाँचौं फाइटमा कुनै विशेष घटना भएन । छैटौं फाइट सुरु भयो । बुलरिङमा लडाकुहरू र निख्खर कालो र तिखा सिङ्ग भएको साँढे जमिसकेका थिए । यो साँढेको भाव मुद्रा र स्फूर्ति यस अघिका साँढेहरूभन्दा फरक थियो । ऊ लगातार खुरले जमिनको माटो खोस्रँदै बुलरिङको एकछेउदेखि अर्को छेउसम्म गुलाफी रुमाल समातेका सहयोगी लडाकुहरूलाई हायलकायल पार्दे सिङ्गौरी खेलिरहेको थियो । अचानक ढोका खुल्यो र बुलरिङमा घाँटीमा बाँधेको घण्ट बजाउँदै आठवटा टाटेपाटे गोरुहरू प्रकट भए । गोरुहरूको टाउको, गर्धन, चारै खुट्टाहरूको रङ्ग कालो र बाँकी जीउ घीउ रङ्गको थियो । हामीहरू तीनछक पर्‍यौं । यो मैले कहिल्यै टीभीमा नदेखेको, किताबमा पनि नपढेको र कहीं कतै नसुनेको दृश्य थियो । बुल फाइटिङको बुलरिङमा घण्ट बजाउँदै आठवटा साँढे किन आए ? यसको के अर्थ हुन सक्छ म घोत्लिरहेको थिएँ कि ती गोरुहरूले साँढेलाई वरिपरिबाट घेरेर आफूहरूको बीचमा हिँडाउँदै लिएर गए । साँढे पनि आज्ञाकारी बाच्छोझैं तिनीहरूसँगै बुलरिङ छोडेर ढोकाभित्र पस्यो ।
'यो के भएको जालन्धा ?' मैले अचम्म मान्दै सोधें ।
'बुल फाइटिङ सञ्चालन कमिटीलाई लागेको हुनुपर्छ कि यस साँढेमा लडाकु साँढेमा हुनुपर्ने विशेष गुणहरू छन् । यस्ता गुणहरू सबै साँढेमा पाइँदैनन् र यसको परीक्षण लडाइँको बेलामात्र हुन्छ । त्यसैले तिनीहरूले यसलाई फर्काए । अब यो साँढेलाई चाडबाड र उत्सवका बेला हुने कुनै महत्त्वपूर्ण 'सो' मा लडाइनेछ ।' यसको भाग्यमा अझै केही दिन बाँच्नुपर्नेरहेछ ।
उसको सट्टामा अर्को खैरो रङ्गको साँढे बुलरिङमा आइसकेको थियो ।
म्याटाडर र साँढेबीच घनघोर लडाइँ सुरु भयो । यस क्रममा यो साँढेले पनि पिकाडरको घोडालाई चित्त पार्‍यो । भन्डै मरेन घोडा । केही मिनेट बित्न नपाउँदै साँढेले गाढा गुलाफी रुमाल हल्लाएर आफूलाई छकाउने एउटा लडाकुलाई सिङ्गले हानेर पछार्‍यो । साँढेले उसको जीउमा कुल्च्यो । ऊ पीडाले करायो । सहयोगीहरू उसलाई बचाउन दौडे । तीनजनाले गुलाफी रुमाल हल्लाउँदै साँढेलाई घाइतेबाट विमुख पार्दे छकाइरहे । अन्यले घाइतेलाई बोकेर रिङ्गबाहिर ल्याए । उसका खुट्टाहरू भाँच्चिएजस्तो लाग्यो मलाई । हामीहरू स्तब्ध भयौं । बुल फाइट्समा यी घटनाहरू सामान्य मानिदा हुन् वा यस्ता घटनाहरू घटित भएनन् भने बुल फाइट्सको रौनक, रोमाञ्चक र रमणीयता सार्थक नहुँदो हो । सशस्त्र मान्छे र निशस्त्र साँढेको यस लडाइँमा अन्ततः साँढेले पराजित भएर मर्नुपर्ने नियति देखेर मेरो मन पीडाले कुँढिए पनि म म्याटाडरको युद्धकला, साहस, रण कौशल, चातुर्य र सीपको प्रशंसक नबनिरहन सकिनँ । इस्कोडा -साँढेलाई मार्ने समय) आयो । म्याटाडरले रातो रुमाल ओर्काउँदै-फर्काउँदै साँढेलाई दिग्भ्रमित बनाइरह्यो । उसले तरबारले साँढेको काँधको बीच विन्दुमा निसाना साँधेर विद्युत्तीय गतिमा तरबार रोप्यो । छालामाथि तरबारको बिँडमात्र देखियो । साँढेको नाक, कान, आँखा र मुखबाट रगतका फोहराहरू छुटे । ऊ बिस्तारै स्याा....स्याा.... गर्दै रिङ्गको किनारमा आयो र डङ्गरङ्ग पल्टियो । उसका आँखाहरू आकाशतिर र्फलक्क पल्टे ।
दर्शकले उठेर ताली बजाउँदै म्याटाडरको अभिवादन गरे । उसले दोस्रो साँढेलाई पनि तरबारको एकै प्रहारले रगत छाद्न लगाएको थियो । खच्चरले साँढेको मृत शरीर तानेर लगे । आजको बुल फाइट्सको हिरो 'म्याटाडर दे टोरस'ले टोपी हल्लाउँदै दर्शकको अभिवादन गर्‍यो । तीनजना लडाकुहरूले पालैपालो छवटा साँढेको वध गरेपछि आजको बुल फाइटिङ समाप्त भयो ।
हामीहरू गह्रौं मनले उठ्यौं । मेरा आँखामा अघि मरेका साँढेका अनुहारहरू नाचिरहेका थिए । मेरो मन उद्वेलित भइरहेको थियो । बुल फाइट्सको वास्तविक नायक को हो ? सशस्त्र मान्छे वा निशस्त्र साँढे ? मेरो मन आफैंसँग यस प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको थियो ।
प्रकाशित : भाद्र १६, २०६९ ०९:५१